विजय गच्छदार कांग्रेसमा अाउने तयारी ! « Deshko News
विजय गच्छदार कांग्रेसमा अाउने तयारी !
काठमाडाैं, चैत्र ५
बैठकमा सहभागी नेता रामकृष्ण यादवले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारलाई कांग्रेसमा भित्राउन सके निर्वाचनका बेला थप मजबुत हुन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष सहभागीले सुनाएको बताए । ‘गच्छदारलाई कांग्रेसमा भित्राउन सके निर्वाचनका बेला थप मजबुत हुन सकिन्छ भन्नेमा सबैको एकमत रह्यो,’ यादवले भने ।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले पनि कांग्रेसका पुराना नेता तथा प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने नेताका हैसियतले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारलाई कांग्रेसले उचित सम्मानसहित भिœयाउन सके निर्वाचनमा कांग्रेसको माहोल निकै राम्रो हुने निष्कर्षसहित नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘गच्छदारजीलाई पार्टीमा ल्याउने हो भने एक नम्बर प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी र सिरहासम्म कांग्रेसलाई फाइदा पुग्छ,’ मन्त्री बुढाथोकीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
अर्का सांसद सञ्जय गौतमले गच्छदारलाई कांग्रेसमा ल्याउँदा पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कांग्रेसलाई निकै ठूलो बल पुग्ने बताएका थिए । उनले बर्दियामा मात्र ३० प्रतिशत बढी थारू समुदाय रहेको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारलाई कांग्रेसमा मिलाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनीहरूले फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारसँग यस विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी भइरहेको भन्दै संस्थागत गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेकाे अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
कांग्रेसमा रहेर मन्त्रीसमेत बनिसकेका गच्छदार संविधानसभाको चुनावको समयमा मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका थिए । सो पार्टीबाट पनि अलग भई उनले फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका हुन् ।
कांग्रेसको सबै विषयमा जानकार गच्छदारलाई पुनः ल्याउन सके चुनावमा परिणाम राम्रो हुने कांग्रेसका ती सांसदको भनाइ छ ।